Kitra any Eoropa – «Ligue des champions 2018» : hiatrika ny famaranana fanintelony ny Real de Madrid | NewsMada
Kitra any Eoropa – «Ligue des champions 2018» : hiatrika ny famaranana fanintelony ny Real de Madrid
Ekipa voalohany nahazo ny tapakila hiatrehany ny famaranana, hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”, taranja baolina kitra, ny Real de Madrid. Tsy mbola afa-bela tamin-dry zalahy ny Bayern de Munich.
Mbola hiaro ny anaram-boninahitra azony, tamin’ny taon-dasa, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa taranja baolina kitra, indray, amin’ity, ny Real de Madrid. Nahazo ny tapakila hiatrehana izany ry zalahy, ny talata lasa teo, nandritra ny manasa-dalana miverina, notanterahina tao amin’ny kianja Santiago Bernabeu, nikatrohany tamin’ny Bayern de Munich.
Tsy naharesy azy mantsy ry Rainiboto fa nisaraka ady sahala 2 no ho 2, tamin’izany, lalao izany. Raha tsiahivina, efa nanantombo tamin’ny isa, 2 no ho 1, teo amin’ny fihaonana mandroso mantsy ry CR7. Tsy nahavita ny valin’adiny izany ny Bayern de Munich, tamin’ity, izay mbola tsy afa-bela tamin-dry zalahy indray.
Raha hiverenana ny lalao, vao nanomboka 2 mn monja ny fihaonana, efa nahatafiditra baolina ny Bayern de Munich, tamin’ny alalan’i Joshua Kimmich. Nihevitra ny Alemà fa hahavita hamadika ny tantara izy ireo. Tsy izay anefa no nitranga fa nametraka ny anarany ao anatin’ity “Ligue des champions” ity koa ilay Frantsay, Karim Benzema, izay nataon’i Zidane, ho tompon-toerana, tamin’ity indray mitoraka ity. Nosahalainy ny isa, teo amin’ny minitra faha-10 ary mbola nampiany indray aza, tany amin’ny fiafaran’ny fizaram-potoana voalohany (45 mn). Nitarika tamin’ny isa teo ny Real.
Nosahalain’i James Rodriguez ny isa teo amin’ny minitra faha-62. Mbola nitohy ny fanantenan’ny Bayern de Munich, taorian’io, ary nanohy ny fanafihana totoafo, saingy tsy nety nahatafiditra baolina intsony izy ireo. Nisy ihany ny baolina saika tafiditr’i Lievandowski, saingy nidona tamin’ny tsatoby izany.
Hiatrika ny famaranana, hatao any amin’ny Stade Olympique ao Kiev, Okrainina, ny asabotsy 26 mey ho avy izao, izany ny Real de Madrid. Famaranana fanintelony eo amin’ny fiadiana ny “Ligue des champions”.